विभिन्न ८६ देशमा पेइड इण्टर्नशिपको मौका दिने गरेका छौं | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा विभिन्न ८६ देशमा पेइड इण्टर्नशिपको मौका दिने गरेका छौं
on: ३१ श्रावण २०७५, बिहीबार १०:०४ शिक्षा
विभिन्न ८६ देशमा पेइड इण्टर्नशिपको मौका दिने गरेका छौं
राजु कट्टेल, प्राचार्य, कान्तिपुर सिटी कलेज
स्थापनाकालमा बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेशनबाट शुरुआत गरेको कान्तिपुर सिटी कलेजले १८औं वर्ष पूरा गरेको छ । कलेजले स्नातक तहमा पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लिकेशन (पीजीडीसीए), बीई–सिभिल इञ्जिनीयरिङ, बीई– कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङ, ब्याचलर अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी र ब्याचलर अफ बिजनेश एड्मिनिष्ट्रेशन (बीबीए) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाहेक स्नातकोत्तरमा आमसञ्चार र पत्रकारिता (एमसीजे) र माष्टर्स अफ कम्प्युटर एप्लिकेशन (एमसीए)समेत अध्यापन गराइरहेको छ । प्रस्तुत छ – यस्ता सङ्काय र अध्ययनपछिको अवसरलगायत विषयमा केसीसीका प्राचार्य राजु कट्टेलसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानी :
यो कलेजमा विद्यार्थीलाई आफ्ना विषयमा कसरी दक्ष बनाउनु हुन्छ ?
हामी प्रयोगात्मक कक्षामा जोड दिन्छौं । कलेजको अध्यापन शैली प्रोजेक्ट वर्कमा आधारित छ । यसबाट विद्यार्थीले पढेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले ८६ ओटा देशमा फेलोसिफसहितको इण्टर्नशिपका लागि जाने अवसर पाउँछन् । विद्यार्थीलाई विदेशमा १ महीनादेखि १ वर्षसम्मको शुल्क पाउनेगरी विभिन्न कम्पनीमा इण्टर्न गराउँदै आएका छौं ।
यस्तो अवसर कुन सङ्कायका विद्यार्थीलाई छ ?
हामीले इण्टरनेशनल एशोसिएशन फर द एक्सचेञ्ज अफ स्टुडेण्ट फर टेक्निकल एक्सपिरियन्स (आईईएएसटी) नेपालसँग विद्यार्थीको इण्टर्नशिपका लागि समन्वय गरेका छौं । यही सम्मन्वयका आधारमा विद्यार्थीलाई बाहिर पठाइन्छ । आफ्नो कलेजबाहेकका प्राविधिक विषयका विद्यार्थीलाई समेत पेइड इण्टर्नशिपमा विदेश पठाउने गरेका छौं ।
विद्यार्थीलाई केको आधारमा यो अवसर दिनुहुन्छ ?
सबै कलेका विद्यार्थीलाई अन्तरवार्ता लिएर छनोट गरिन्छ । हरेक डिसेम्बरमा आवेदन दिन पाइन्छ र छनोट भएकाले यस्तो मौका पाउँछन् । यस पटक मात्र ४९ जना विद्यार्थी १८ ओटा मुलुक गएका छन् । उनीहरू जर्मनी, थाइल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्डलगायत देशका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत छन् ।
विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आउन इच्छुक हुने गरेका छन् ?
नेपालमा नयाँ विषयमा सिक्न पाउने भन्दै विदेशी विद्यार्थी आउन उत्साहित भएको पाएका छौं । विकसित मुलुकबाट आएका विद्यार्थीले यहाँ धेरै अवसर पाएको बताउने गरेका छन् । केसीसीको सिभिल इञ्जिनीयरिङ अनुसन्धान विभागमा विदेशी विद्यार्थीले यहाँका विद्यार्थीसँग बसेर अनुभव आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।
केसीसीका मुख्य विशेषता के के हुन् ?
हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को दिगो विकास समाधान सञ्चालनको (सस्टेनेबल डेभलममेण्ट सोलुशन नेटवर्क)को सदस्य छौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तय गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य–२०३०’ हासिल गर्न हामीले पनि सहयोग गरेका छौं । यो शैक्षिक सङ्गठनमा हामी मात्र सदस्य हौं । हामीबाहेक यसमा सदस्य हुने गैरशैक्षिक सङ्गठन नेपालमा ५–६ ओटा मात्र छन् । हामी हरेक वर्ष केसीसी प्रदर्शनी गर्छौं । यसमा विद्यार्थीले गरेको क्रियाकलाप प्रदर्शन गरिन्छ । अन्य नियमित कार्यक्रम, प्रिजेण्टेशन तथा सेमिनार र फिल्ड भिजिट कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । कलेजले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अनलाइनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कलेजले विद्यार्थीको रोजगारीका लागि कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
विभिन्न १० कम्पनीसँग इण्टर्नशिप र जब प्लेसमेण्टका लागि सहकार्य गरेका छौं । बीबीएले हरेक वर्ष मिडिया जर्नल प्रकाशित गर्छ । वार्षिक रूपमा हरेक बीबीएका सातौं सेमेष्टरका विद्यार्थीले व्यवस्थापन केन्द्रित म्यागेजिन प्रकाशित गर्छन् । यसले विद्यार्थीलाई जब प्लेसमेण्टमा सहयोग गरेको छ । उक्त म्यागेजिन हेरेर र म्यागेजिनका लागि विज्ञापन पनि लिन जाँदा ‘जब अफर’ आउने गरेका छन् । यसैगरी मास कम्युनिकेशन डिपार्टले हरेक वर्ष मिडिया जर्नल प्रकाशित गर्दै आएको छ । कलेजभित्रै सेण्ट्रल फर सफ्टवेयर डेभलपमेण्ट एण्ड रिसर्च संस्था सञ्चालनमा छ । यसले विद्यार्थीलाई इण्टर्नशिप र जब प्लेसमेण्टका लागि सघाउँछ । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी जागीरविहीन भएर बस्नुपरेको छैन । हामीले प्रोजेक्ट वर्क तथा प्रयोगात्मक शीपमा आधारित विशेष प्राविधिक शिक्षा अपनाएका छौं ।